ATMIS oo 1-da April baddeleysa AMISOM | KEYDMEDIA ENGLISH
ATMIS oo 1-da April baddeleysa AMISOM
Hawlgalka cusub, oo waqtigiisu ku ekaan doono 33 bilood, ayay dhaqaalihiisa bixin doonaan AU iyo EU, waxaana markaas wixii ka danbeeyay ammaanka dalka lagu wareejin doonaa ciidamada Soomaaliya.
MUQDISHO, Soomaaliya – Guddoomiyaha Arrimaha Siyaasadda Amniga iyo Nabadgelyada ee Midowga Afrika, Bankole Adeoye, ayaa booqasho rasmi ah oo saddex maalmood ah oo maanta ku eg, ku jooga Soomaaliya, xilli ay maalmo kooban ka harsan yihiin joogitaanka AMISOM.
Danjire Bankole, oo maanta saxaafadda kula hadlay Muqdisho ayaa shaaciyay in kowda bisha April, uu Hawlgalka cusub ee African Union Transition Mission in Somalia - ATMIS ka shaqo billaabi doono Soomaaliya, isagoo badelaya African Union Mission in Somalia -AMISOM.
KON, ayaa hore u baahisay, in AU iyo DF, ku heshiiyeen qorshaha hawlgalka cusub, halka Danjire Bankole, uu maanta sheegay, in Golaha Ammaanka iyo Nabadeynta ee Midowga Afrika & Golaha Ammaanka ee QM , ay ka hor 31-ka March, soo geba-gabeeyaan Howlgalka AMISOM.
Bankole Adeoye, wuxuu xusay, in Howlgalka ATMIS, uu xoogga saari doono Saddex arrimood oo muhiim ah, sida; diyaarinta ciidan si fudud u ciribtira Kooxda Al-Shabaab iyo Daacish, xasilinta dalka iyo in mas'uuliyadda amniga ay la wareegaan ciidamada Soomaaliya.
Hawlgalka cusub, oo waqtigiisu ku ekaan doono 33 bilood, ayay dhaqaalihiisa bixin doonaan AU iyo EU, waxaana markaas wixii ka danbeeyay ammaanka dalka lagu wareejin doonaa ciidamada Soomaaliya, sida lagu lagu heshiiyay kulamadii Addis Ababa, Qaahira iyo Muqdisho.
Danjire Bankole Adeoye, waxaa socdaalkiisa ku wehlinaya saraakiisha ugu sarreysa AMISOM, wuxuuna kulamo kala duwan la qaatay madaxda ugu sarreysa dalka, guddiyada doorashada, bulshada rayidka iyo wakiillada ka socda dalalka ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya.
AMISOM ayaa muddo si dhow ula shaqeyneysay dowladda Soomaaliya, waxaana dalka ka jooga ku dhawaad ​​22,000 oo askari. Todobada March 2022, ayay 15 sano u buuxsami doontaa jiritaanka Hawlgalka AMISOM, kuwaas oo ka qeyb qaatay sugidda amniga goobo muhiim ah.